Esophageal Varices (အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်း) - Hello Sayarwon
Esophageal Varices (အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Esophageal Varices (အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်း)
Esophageal Varices (အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်း) ကဘာလဲ။
အစာအိမ်နဲ့ လည်မျိုကိုဆက်ပေးထားတဲ့ ပြွန်အစာရေမျိုပြွန်ရှိ သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့အသည်းရောဂါသည်တွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
အသည်းကိုစီးတဲ့သွေးစီးကြောင်းကို သွေးခဲဒါမှမဟုတ် အသည်းအမာရွတ်တစ်ရှူးက ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် သွေးတွေက သွေးအများကြီးကိုလက်ခံသယ်မပေးနိုင်တဲ့ သွေးကြောငယ်လေးတွေအတွင်းကို စီးဝင်သွားပါတယ်။ သွေးကြောလေးတွေမှာ သွေးယိုစိမ်ြ့ခင်းနဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကိုတောင်ပေးနိုင်တဲ့သွေးထွက်ခြင်းတွေထိဖြစ်သွားနိုင်တဲ့
သွေးကြောပေါက်သွားခြင်းအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးထွက်ထားခြင်းဖြစ်ထားမယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင်ချေကမြင့်လာပါတယ်။ သွေးတွေအများကြီးဆုံးရှုးံရမယ်ဆိုရင် ရှော့ခ်ရသွားနိုင်ပြီး သေစေနိုင်ပါတယ်။
Esophageal Varices (အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Esophageal Varices (အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်း ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
အသားမျက်လုံးဝါခြင်း ၊ သွေးထွက်လွယ်ခြင်း၊ ဗိုက်အတွင်းရေများရှိနေခြင်းရေဖျဉ်းစွဲခြင်းကဲ့သို့သော နာတာရှည်အသည်းရောဂါလက္ခဏာများ
Esophageal Varices (အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အဓိကဖြစ်ပွားစေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ အသည်းခြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းခြောက်ခြင်းက သွေးတွေကိုအစာအိမ်နဲ့အူတွေကနေ အသည်းဆီပို့ဆောင်ပေးတဲ့ သွေးပြန်ကြောမကြီးဆီကို သွေးတွေစုပုံသွားပါတယ်။ အသည်းသွေးပြန်ကြောမကြီးနဲ့ အနီးအနးသွေးပြန်ကြောတွေမှာ သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ သွေးတွေက အစာရေမျိုပြွန်ရဲ့အောက်ခြေအကျဆုံးမှာရှိတဲ့ သွေးကြောငယ်လေးတွေကဲ့သို့သော သွေးကြောငယ်လေးတွေကို လမ်းကြောင်းအဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။ နံရံပါးတဲ့သွေးကြောငယ်လေးတွေအနေနဲ့ ထပ်ဝင်လာတဲ့သွေးတွေကြောင့် ဖောင်းလာပါတယ်။ တခါတရံမှာ ပေါက်သွားပြီး သွေးထွက်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့အသည်းခြောက်ခြင်း၊ အသည်းရောင်ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်း၊ အရက်သောက်ြခ်င်းကြာင့်ဖြစ်တဲ့ အသည်းရောဂါ၊ အသည်းအဆီဖုံးခြင်း၊ သည်းခြေရည်ပို့ပြွန်ပြဿနာ( သည်းခြေပို့ပြွန်ခြောက်ခြင်း) စတဲ့အသည်းရောဂါတွေကြောင့် အသည်းခြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သွေးခဲခြင်း- အသည်းသွေးပြန်ကြောမကြီးဒါမှမဟုတ်သူထဲ့ကို စီးနေတဲ့သရက်ရွက်သွေးပြန်ကြောအတွင်း သွေးခဲခြင်းက အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ကပ်ပါးပိုးတွယ်ခြင်း – Schistosomiasisဆိုတာကို အာဖရိက၊ တောင်အမေရိက၊ ကာရေဘီယန်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှအချို့ဒေသတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ကပ်ပါးကောင်က အသည်း၊ အဆုတ်၊အူနဲ့ သည်းခြေအိတ်တွေကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
Esophageal Varices (အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဘယ်အရာတွေက Schistosomiasis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
Schistosomiasis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
Esophageal Varices (အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အသည်းခြောက်ရောဂါရှိမယ်ဆိုရင် အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်းအတွက် သင့်ဆရာဝန်ကစစ်ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်။ အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်းအတွက် စမ်းသပ်နည်းအချို့က
Esophageal Varices (အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အသည်းသွေးပြန်ကြောမကြီးရဲ့သွေးဖိအားကို လျှော့ပေးခြင်းက အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်းကနေသွေးထွက်နိုင်ချေကို နည်းစေပါတယ်။
အသည်းသွေးပြန်ကြောမကြိးသွေးဖိအားကျစေသည့်ဆေးများ – beta blockerလို့ခေါ်တဲ့သွေးပေါင်ကျဆေးကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ propranolol (Inderal, Innopran) and nadolol (Corgard)စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
သွေးထွက်နေတဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကို သားရေကွင်းနဲ့စီးထားခြင်း- အစာရေမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်းကနေ သွေးထွက်နိုင်ချေများတာကြောင့် သားရေကွင်းစီးခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
အတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းအသုံးပြုပြီး ဆရာဝန်တွေက သွေးကြောဖောင်းတွေကို တွေ့နိုင်ပြီး သားရေကြိုးနဲ့အုပ်စီးထားလိုက်ခြင်းက သွေးကြောတွေကို တင်းကျပ်စေပြိး သွေးထွက်ခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီနည်းလမ်းက အစာရေမျိုပြွန်ခြောက်ခြင်းကဲ့သိုပသော နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ုနိုင်ချေနည်းပါတယ်။
သွေးထွက်နေမယ်ဆိုရင် သွေးထွက်ခြင်းကိုတတ်နိုင်သမျှ တားနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ သွေးထွက်ခြင်းကို လျင်လျင်မြန်မြန်တားလိုက်နိုင်ခြင်းက ရှော့ခ်ရခြင်းမှာကာကွယ်ပြီး သေဆုံးခြင်းကိုတားမြစ်နိုငပါတယ်။
အသည်းသွေးပြန်ကြောမကြိးဆီ စီးသည်ံသွေးများကိုနှေးစေသည့်ဆေးများ – octreotide (Sandostatin)ဆေးက ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများဆီကနေ အသည်းသွေးပြန်ကြောမကြီးဆီကို သွေးစီးနှုန်ေးနှးစေပြီး အတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းကုထုံးနဲ့ တွဲသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ သွေးထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း ငါးရက်ဆက်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
အသည်းသွေးပြန်ကြောမကြီးမှ သွေးများကိုပြောင်းစီးစေခြင်း၊ သင့်ဆရာဝန်က အသည်းပြန်ကြောမကနေ တစ်ကိုယ်လုံးကိုစီးဆင်းတဲ့သွေးကြောတွေထဲကို လမ်းလွဲပေးပါလိမ့်မယ်။ အသည်းအစားထိုးကုသဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်း ယာယီအနေနဲ့သော်လည်းကောင်း အခြားကုသမှုတွေမအောင်မြင်ခဲ့ရင်သောလည်ေးကာင်း အဓိကအသုံးပြုပါတယ်။
သွေးပြန်ဖြည့်ခြင်း -ဆုံးရှုးံထားတဲ့သွေးတွေအတွက် သွေးသွင်းခြင်းနဲ့ သွေးထွက်ခြင်းကိုတားဖို့အတွက် သွေးခဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ထည့်ပေးရပါလိမ့်မယ်။
ကူးစက်ပိုးမှကာကွယ်ခြင်း – သွေးထွက်နေချိန်မှာ ကူးစက်ပိုးဝင်နိုင်ချေများပါတယ်။ ကူးစက်ပိုးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် ပဋိဇီဝဆေးသောက်ဖို့လိုပါတယ်။
အသည်းအစားထိုးခြင်း– ပြင်းထန်တဲ့အသည်းေရောဂါသည်တွေ အစာရေမျိုပြွန်သွေးကြောဖောင်းတွေကနေ သွေးတွေမကြာခဏထွက်နေမယ်ဆိုရင် ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အသည်းအစားထိုးခြင်းက အောင်မြင်လေ့ရှိပေမဲ့လည်း စောင့်နေရတဲ့လူနာအရေအတွက်က ရနိုင်တဲ့အသည်းအရေအတွက်ထက်များနေပါတယ်။
အသီးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ပြည့်ပြည့်၀၀စားသုံးပါ။ ပရိုတင်းကြွယ်ဝတဲ့ကောက်နှံတွေနဲ့ အဆီမပါတဲ့အသားတွေကို ရွေးချယ်စားသုံးပါ။ အဆီပါတဲ့အစားအစာ၊ ကြော်ထားတဲ့အစားအစာတွေကို လျော့စားပါ။
အဝလွန်ခြင်းက အသည်းခြောက်ခြင်းဖြစ်နိင်ချေများတာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကိုပုံမှန်ထိန်းထားပါ။ အဝလွန်နေရင် ဝိတ်လျှော့ပါ။
ဓါတုပစ္စည်းတွေကို သတိထားသုံးစွဲပါ။ သန့်စင်ဆေး၊ အင်းဆက်ဖျန်ေးဆးကဲ့သို့သော အိမ်သုံးဓါတုပစ္စည်ေးတွကို အညွှန်းအတိုင်းလိုက်နာသုံးစွဲပါ။ ဓါတုပစ္စည်းအနီးနားမှာ အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုရင် စိတ်ချရတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကို လိုက်နာပါ။ အသည်းက သင့်ခန္ဓါကိုယ်အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတောကြောင့် အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ထိတွေ့ခြင်းကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်သတိထားခြင်းဖြင့် သင့်အသည်းကိုအနားပေးသင့်ပါတယ်။
အသည်းရောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချပါ။ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း ဒါမှမဟုတ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်ကို အသည်းရောင်အသားဝါပိုးဘီ၊အေအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်မထိုးသင့်မေးပါ။
Esophageal varices. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/esophageal-varices/home/ovc-20206457. Accessed October 08, 2016.
Esophageal varices. https://medlineplus.gov/ency/article/000268.htm. Accessed October 08, 2016
Esophageal varices. http://www.healthline.com/health/bleeding-esophageal-varices. Accessed October 08က, 2016.